Xakameeyn: Shaqaalaha Goobaha Iskuullada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xakameeyn: Shaqaalaha Goobaha Iskuullada
Uppdaterat fredag 15 april 2011 kl 15.45
Bareyaasha iyo shaqaalaha kale e eka howl-gala goobaha iskuullada oo la soo jeediyay in waajibaad hor leh dusha laga saaro.
Baaraha gaarka Margareta Åberg, ayaa soo jeedisay una gudbisay wasiirka tacliinta Jan Björklund baaritaan ku saabsan fikir la xiriira in dhammaan shaqaalaha iskuullada iyo goobaha la xiriira ee dhallaanka lagu waajibiyo iney maamulaha iskuulka ama xannaanada dhallaanka la socodsiiyaan haddii ey dareemaan/arkaan dhibaatooyin la xiriira dhallaanka, iyadoona middaa laga eegayo danta dhallaanka ee xeerka (SOU 2011:33).
Qorshahan la soo jeediyay ayuu macnihiisu yahay in iyada oo la eegayo xeerka u degsan iskuullada iyo howlaha wax-barashada dhammaan shaqaalaha ka howl-galaba lagu waajibiyay inay soo sheegaan haddii ay arkaan ama tuhunba ka galo xaalad aan wanaagsanayn ee dhallaanka haysata ama ku soo wajahan.
Xaaladda ayaa ahaan karta haddii ay jiraan xaalado ka duwan xeerarka maamulka iskuullada ee halis-gelinaya dhallaanka ama ardayda caafimaadkooda, iyada oo weliba laga eegayo suurtagalka koriimmada dhallaanka iyo goolka wax-barashada iyo hoowlahaba. Kuna soo war-geliyaan hayadda kor-meerka iskuulaadka ama waaxda masuuliyaddu ka saaran tahay ee maamulka degmada iskuulku ka tirasan yahay.
Baaraha ayaa qaba in haddii fikirkaa la xeereeyo, goor hore wax looga qaban karo dhibaatooyinka dhallaanka la soo gudboonaada.
Isha: Xohaynta dowladda